Baiboly pejy 35 - Ny Baiboly
Voalohany < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Manaraka Farany
Eksaody toko 7 (tohiny)
17Ka izao no lazain'ny Tompo: Izao no hahafantaranao fa izaho no Iaveh: Hokapohiko amin'ity tehina an-tànako ity ny rano eo amin'ny ony, dia ho voaova ho rà; 18ka ny hazandrano ao anaty ony ho faty, ny ony hanjary maimbo; ary ny Ejipsiana harikoriko tsy te-hisotro ny rano eo an'ony.
19Hoy Iaveh tamin'i Moizy: Lazao amin'i Aarona hoe: Raiso ny tehinao ary ahinjiro eo ambonin'ny ranon'i Ejipta ny tànanao, dia amin'ny reniranony, amin'ny lakan-dranony, amin'ny dobo aman-kamoriny rehetra. Hanjary rà ireny ka hisy rà amin'ny tany Ejipta manontolo, na amin'ny fasian-drano hazo, na amin'ny fasian-drano vato. 20Dia nataon'i Moizy sy Aarona izay nandidian'ny Tompo azy. Naingain'i Aarona ny tehina, nokapohiny teo anatrehan'i Faraona sy ny mpanompony ny rano tamin'ny ony, ka nanjary rà avokoa ny rano rehetra tamin'ny ony; 21Maty ny hazandrano tamin'ny ony, nanjary maimbo ny ony, tsy azon'ny Ejipsiana nosotroina ny rano tamin'ny ony ary heni-dra ny tany Ejipta tontolo. 22Nahavita torak'izany tamin'ny fankatoavany ihany koa anefa ny mpanao odin'i Ejipta, ka nihamafy ny fon'i Faraona, fa tsy nihaino an'i Moizy sy Aarona izy, araka ny voalazan'ny Tompo rahateo. 23Dia nody Faraona ka nony tonga tany an-tranony, tsy nandinika izany akory tao am-pony. 24Ary ny Ejipsiana rehetra nihady lavaka teny akaikin'ny ony hahitany rano azo sotroina, fa tsy azony nosotroina ny rano tamin'ny ony.
25Lasa ny andro fito taorian'ny namelezan'ny Tompo ny ony.
26Dia hoy Iaveh tamin'i Moizy: Mankanesa ao amin'i Faraona, lazao aminy hoe: Izao no tenin'ny Tompo: Avelao handeha ny vahoakako hanompo ahy. 27Fa raha mandà tsy handefa azy hianao, hataoko hidiran-doza, avy amin'ny sahona, ny taninao manontolo.
28Ho hipoka sahona ny ony, ary hiakatra ireny ka hiditra ao an-tranonao, ao an'efitrano fandrianao, eny ambony farafaranao, ao an-tranon'ny mpanomponao, eny amin'ny vahoakanao, amin'ny lafaoronao, ary amin'ny fanditian-dafarininao. 29Hiakaran'ny sahona avokoa hianao sy ny vahoakanao ary ny mpanomponao rehetra.
21Nampanalain'i Faraona Moizy sy Aarona nilazany hoe: Mandehana hianareo manolotra sorona amin'ny Andriamanitrareo eto amin'ity tany ity. 22Ka hoy Moizy: Tsy mety ny manao izany, fa zava-padin'ny Ejipsiana ny sorona atolotra amin'ny Tompo Andriamanitray; ka raha eo imason'i Ejipsiana izahay no hanao sorona ny zava-padiny, tsy sakoa ataony tora-bato? 23Fa handeha lalan-kateloana any an'efitra izahay no hanolotra sorona amin'ny Tompo Andriamanitray, araka izay holazainy aminay. 24Dia hoy Faraona: Halefako handeha ihany hianareo, hanolotra sorona amin'ny Tompo Andriamanitrareo, any an'efitra, nefa aza lasan-davitra loatra hianareo amin'izany fandehananareo izany. Ary manaova fivavahana ho ahy. 25Ary hoy Moizy: Indro hivoaka ato aminao aho, dia hangataka amin'ny Tompo, ka rahampitso ny lalibe dia hiala amin'i Faraona sy ny mpanompony ary ny vahoakany. Fa aoka kosa Faraona tsy hamitaka intsony, ka tsy hamela ny vahoaka handeha hanolotra sorona amin'ny Tompo. 26Vao niala avy ao amin'i Faraona Moizy, dia nivavaka tamin'ny Tompo; 27ary notanterahin'ny Tompo ny tenin'i Moizy ka dia niala tamin'i Faraona sy ny mpanompony ary ny vahoakany ny lalibe ka tsy nisy tavela, na dia iray aza. 28Nefa mbola nanamafy ny fony ihany indray Faraona tamin'izany, ka tsy nalefany handeha ny vahoaka.
8Dia hoy Iaveh tamin'i Moizy sy Aarona: Mandraofa hianareo lavenona eran'ny tànanareo, eo amin'ny lafaoro lehibe, dia hataon'i Moizy savoan-danitra eo imason'i Faraona izany, 9fa hitora-jofo eran'ny Ejipta izany, ka ho tonga boiboika mipoipoitra ho vay amin'ny olona sy ny biby eran'ny tany Ejipta.
Pejy: Voalohany < 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.2305 seconds